🥇 ▷ Tani waxay noqon doontaa qaabka mugdiga ah ee barnaamijka shaqo ee LinkedIn ✅
Tani waxay noqon doontaa qaabka mugdiga ah ee barnaamijka shaqo ee LinkedIn
Habka mugdiga ah ee codsiyada Android waa shey in sanadka 2019 oo dhan aysan aheyn inay ka maqnaadaan. Waxaa laga yaabaa in taasi ay tahay sababta ay soosaarayaashu ugu degdegeen inay cusboonaysiiyaan dhammaan codsiyadooda mawduucan, kaas oo u oggolaanaya inaanu nuugin iftiin aad u badan jawiga mugdiga ah iyo sidoo kale keydi xoogaa batariga markii lagu isticmaalo shaashadaha OLED. Shaashadda OLED ma shiddo pixels marka midabka madoow la muujiyo taasina waxay ka dhigeysaa mawduucyada mugdiga ah inay noo oggolaadaan inaan xoogaa xoogaa badbaadinno.
Mid ka mid ah codsiyada sidoo kale diyaarinaya mawduuca mugdiga ah waa LinkedIn, oo ay leedahay Microsoft. Baaraha cilmi baarista Jane Manchun Wong ayaa ogaadey oo ku sheegay barteeda. Qaabkan cusub wuxuu kuu oggolaanayaa inaad iska hubiso waxa asxaabtaada ama dadka aad isla shaqeysaan ay qabanayaan iyadoon loo baahnayn shaashadda inay ku iftiimiso mawduuca xiriiriyaha caadiga ah ee ‘LinkedIn’. Iftiiminku aad uma badna oo miirayaasha iftiinka buluugga ah ayaa si isa soo taraysa ugu badan taleefannada mobilada.
Tani waxay noqon doontaa mawduuca mugdiga ah ee LinkedIn
LinkedIn durba waxay leedahay mawduuc mugdi ah oo diyaar u ah barnaamijka moobiilka ee Android. Xaqiiqdii, mawduucan mar hore wuxuu ku jiraa koodhka in kasta oo bini-aadamku ayna wali awoodin inay dhaqaajiso. Sawirka soo socda waxaan kaaga tageynaa qabashada sida uu qaabkani noqon doono, kaasoo noo ogolaanaya inaan fahamno inaysan iyagu ag joogi doonin. Waxkastoo waxaa lagu arki doonaa asal madow oo runti waxay ina xasuusineysaa mowduucyo mugdi ah oo Chrome uu hadda ku adeegsanayo Android, oo uu miyir qabo iyo xoogaa caajis ah oo midabyo ah.
Xilligan la joogo LinkedIn’s’s mugdiga wali wuu ku jiraa wajiga horumarka iyo dhab ahaantii waa nooc gebi ahaanba aan xasilloonayn. Wong wuxuu wax ka weydiinayey furaha dalabka wuxuuna ogaadey in qeybo ka mid ah istcmaalka wali uusan awoodin habkaan mugdiga ah. Xaqiiqdii, xitaa astaanta ‘LinkedIn’ ayaa isu beddeli lahayd midab buluug caadi ah oo madow iyo caddaan ah.
LinkedIn dhab ahaantii waxay qaadan doontaa waqti macquul ah si loo soo afjaro horumarka loona diro habka mugdiga ah isticmaaleyaasha beta. In kasta oo taasi jirto, tani waxay muujineysaa taas ugu dhakhsaha badan waxaan ka heli doonaa mobiladeena markasta oo soo saare uu ku soo bandhigo dalabkiisa waan ku faraxsanahay waxbadan. Haddii aad raadineyso barnaamijyo leh qaab mugdi ah halkan waxaa ku yaal qaar horeyba u sii dhaqaajin kara.
Warar kale oo ku saabsan… Microsoft